Beginners အတွက် Business Tips လေးခု
Beginners များအတွက် Business Tips လေးခု
27 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 4
ပိုက်ဆံအများကြီးမလိုဘဲ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို အွန်လိုင်းမှာ စတင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ ကောင်းပြီ၊ သင်က ၉ မှ ၅ အလုပ်နဲ့ ချည်နှောင်ထားရင်၊ ဒါက မင်းကို အကြိမ်အနည်းငယ် ဖြတ်သွားနိုင်တယ်။ သတင်းကောင်းမှာ အင်တာနက်သည် ယခုအခါတွင် သင်၏ franchise ကို အစမှစတင်၍ တည်ထောင်နိုင်သည့် ကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရွာကြီးဖြစ်လာပါသည်။ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းငယ်အချို့သည် အွန်လိုင်းမှ စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါတွင် အင်တာနက်မှ ငွေအများအပြား ရှာနေကြပါသည်။
ပြီးတော့ သူတို့ထဲက အချို့ကို သင်တွေ့ဖူးတာကြောင့်၊ သင့်စိတ်ထဲမှာ အွန်လိုင်းစီးပွားရေး အိုင်ဒီယာ အများအပြား ရှိနေတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ ငွေဘက်ခြမ်းကို တွေးကြည့်တဲ့အခါ နည်းနည်းတော့ စိန်ခေါ်မှုလို့ ထင်ရပါတယ်။ ကံကောင်းစွာဖြင့်၊ သင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ အသေးစားလုပ်ငန်းချေးငွေကို အမြဲရနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့လမ်းကိုရှာဖို့ လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုလိုနေပါသေးတယ်။ စတင်သူများအတွက် ဤစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များသည် သင်၏ပထမခြေလှမ်းကိုလှမ်းပြီး သင့်လုပ်ငန်းငယ်အတွက် ခိုင်မာသောအစုစုတစ်ခုကို ထူထောင်ရန် ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
1. အွန်လိုင်းစီးပွားရေးအိုင်ဒီယာများမှတဆင့် သင်နှစ်သက်သောအရာကို ရှာဖွေပါ။
2. Niche တစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
3. ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်ကိုရွေးချယ်ပြီး သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။
4. Domain Name ကို မှတ်ပုံတင်ပါ။
ဤသည်မှာ အများအားဖြင့် အားလုံးသဘောပေါက်ရန် ပထမခြေလှမ်းဖြစ်သည်။ အသေးစားစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များ. သင်၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ရွေးချယ်စရာများစာရင်းမှ၊ သင်သည် သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုကို နှိပ်ပြီး ၎င်းကို လိုက်သွားနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ သင်သည် အခြားသော လုပ်ငန်းငယ်ပိုင်ရှင်များထံမှ သင်ယူနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ အွန်လိုင်းငွေရှာနည်းများကို နားလည်နိုင်သည်။ အမြတ်အစွန်းအများဆုံးအွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစုများထဲတွင်-
Amazon နှင့် eBay ကဲ့သို့သော eCommerce စတိုးဆိုင်များသည် အင်တာနက်ပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချသည်။
ဖက်ရှင်နှင့် ခရီးသွားဘလော့ဂ်များကဲ့သို့သော သီးခြားအကြောင်းအရာများကို အာရုံစိုက်သည့် သီးသန့်ဘလော့ဂ်များ
အကယ်၍ သင်သည် လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင် ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါက သင်သည် စီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ထမ်းဆောင်နိုင်သည့် အွန်လိုင်းအတိုင်ပင်ခံအေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းသင်တန်းများနှင့် eBooks များအပါအဝင် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကြောင်းအရာများကို ရောင်းချသည့် ဝဘ်ဆိုက်တစ်ခု။
အွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးသည့် ဆော့ဖ်ဝဲ (SaaS) မော်ဒယ်များ။
ထိုသို့သောအွန်လိုင်းစီးပွားရေးစိတ်ကူးများသည် သင့်အား နည်းလမ်းများစွာဖြင့် ဝင်ငွေရှာရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် တိကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သုံးစွဲသူများထံ သင်ရောက်ရှိနိုင်သည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
စတင်သူများအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် နယ်ပယ်တစ်ခုကို ရှာဖွေခြင်းသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ယခုသင်သည် သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြံဉာဏ်များကို ပိုင်းဖြတ်ပြီး အောင်မြင်ရန်အလားအလာကောင်းတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် မည်သည့် franchise ကိုမဆိုတည်ဆောက်ရာတွင် အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းဖြစ်ရပါမည်။ အလားအလာရှိသော အသေးစားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင့်တွင် မသေချာမရေရာမှုများရှိနေသောကြောင့် ပါဝင်ပတ်သက်နေသော မသေချာမှုများများစွာရှိနေပါသည်။
ဤအချိန်တွင်၊ သင်ကဲ့သို့ အလားတူအမြင်မျိုးရှိကြသော လမ်းညွှန်ဆရာများနှင့် သင့်ကိုယ်သင် ပေါင်းသင်းခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်ရှိပေသည်။ ဤလမ်းညွှန်ပေးသူအများအပြားသည် ယခင်က သင့်ရာထူးတွင်ရှိဖူးပြီး အရာများကို ကွဲပြားစွာမြင်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကို စတင်ခြင်းသည် အန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သင်ထိုပထမခြေလှမ်းကို လုပ်ဆောင်ပါက ဖြစ်သည်။ အောင်မြင်သည်ဖြစ်စေ ကျရှုံးသည်ဖြစ်စေ သင်ယူစရာများစွာရှိပါသေးသည်။ ဒါကိုစိတ်ထဲမှတ်ထားပြီး အင်တာနက်မှာရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ အိုင်ဒီယာကိုယူပြီး ပိုကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ တစ်ခုခုထည့်လိုက်ခြင်းဖြင့် နယ်ပယ်တစ်ခုကို စမ်းကြည့်ပါ။
ဘတ် Lenovo သည် Featherweight ThinkPad X1 Nano စတင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ယူအေအီး၏“ မည်သည့်နေရာမှမဆိုအလုပ်” အစီအစဉ်ကိုအားပေးသည်
အကြမ်းဖျင်း 72% စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အမည်များ အတိုကောက်များ သို့မဟုတ် ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာ စကားလုံးကစားခြင်းမှ ရရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအရာသည် သင်အချိန်ယူ၍ စဉ်းစားရမည့်အရာဖြစ်သည် ဟု မပြောဘဲနေပါသည်။ သင့်လုပ်ငန်းကတ်များတွင် ကြည့်ကောင်းစေမည့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော အမှတ်တံဆိပ်အမည်တစ်ခုကို ကျင့်သုံးကြည့်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင်၏ပစ်မှတ်ပရိသတ်သည် ၎င်းကိုမှတ်မိရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်၊ အသုံးပြုသူနှင့် အဆင်ပြေသော ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဖန်တီးခြင်းသည် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးတစ်ခုထူထောင်ရန်အတွက် အရေးကြီးဆုံးအဆင့်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းအမြင်သည် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်များ သင့်ထံမှ ၎င်းတို့လိုချင်သောအရာကို ရှာဖွေရန် လွယ်ကူသင့်သည်။
ဤတွင်၊ သင်သည် ပိုမိုသိသာထင်ရှားသော ဖောက်သည်အစုအဝေးသို့ရောက်ရှိရန် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း (SEO) နည်းဗျူဟာများကို အသုံးချရန် စိတ်အားထက်သန်နေရမည်ဖြစ်သည်။ SEO သည် သင့်လုပ်ငန်းကို ပိုမိုမြင့်မားလာစေရန် တွန်းအားပေးနိုင်သည့် ခိုင်မာသောအကြောင်းအရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင့် website သည် Google ရှိ အမျိုးမျိုးသောသော့ချက်စာလုံးရှာဖွေမှုများတွင် ကောင်းမွန်စွာ အဆင့်သတ်မှတ်ထားကြောင်း သေချာစေရန် စိတ်အားထက်သန်နေရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်တစ်ခုပေါ်တွင် အခြေချပြီးသည်နှင့် ယခု သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်အတွက် ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါပြီ။ ဤတွင်၊ သင့်လုပ်ငန်း၏အကောင်းဆုံးဝဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းကောက်ကြောင်းကို နောက်ဆုံးတွင်ညွှန်ပြသည့် အကြံပြုချက်အချို့သည် အသုံးဝင်လာပါသည်။ ၎င်းတို့ကို အောက်တွင် ကြည့်ပါ။
သင်၏ ဒိုမိန်းအမည်သည် တိုတောင်းရပါမည်။, ထုတ်ကုန်နယ်ပယ်နှင့် တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည့် အဓိကစကားလုံးတစ်ခု။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုသည် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် healthline.com ကဲ့သို့ ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခု ရှိနေနိုင်သည်။ သင်ပြောပြသည့်အတိုင်း၊ သော့ချက်စာလုံးသည် ဒိုမိန်းအမည်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်သုတေသနပြု သင့်ဒိုမိန်းအမည်ကို မယူရသေးကြောင်း သေချာစေရန်။ ဤနည်းအားဖြင့် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏အထောက်အထားကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် Instagram သို့မဟုတ် Facebook တွင် သင့်လုပ်ငန်းအမည်ကို ပြောင်းလဲရန် မလိုအပ်ပါ။ ?
သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်ကို စတင်လည်ပတ်ပြီးသည်နှင့် ငွေရှာရန် ၎င်းကို အသုံးပြုရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ သင်၏ဖောက်သည်များထံ ထုတ်ကုန်များကို တိုက်ရိုက်ရောင်းချနိုင်သည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုရှိပါမည်။ အလားတူ၊ သင်သည် အွန်လိုင်းစတိုးကို အသုံးပြု၍ ရောင်းချရန် ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဤတွင်၊ သင့်ဝန်ဆောင်မှုတွင် Amazon နှင့် eBay ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းကြီးကြီးမားမားများနှင့်အတူ လူကြိုက်များသောအွန်လိုင်းစျေးကွက်သည် အသုံးဝင်လာနိုင်သည်။
ဒုတိယ၊ သင်၏အွန်လိုင်းစီးပွားရေးသည် ကြော်ငြာများရောင်းချခြင်းဖြင့် ငွေရှာနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ကြော်ငြာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖောက်သည်များထံ ရောက်ရှိရန် ကြော်ငြာများတင်နိုင်သည့် သင့်ဆိုဒ်မှ ကြော်ငြာနေရာကို ပေးရန်အတွက်လည်း ဤအခွင့်အရေးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုမှကြွလာ စတင်သူများအတွက် အွန်လိုင်းစီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ ဤအရာများသည် သင်အာရုံစိုက်ရန် အဓိကလိုအပ်သောအချက်များဖြစ်သည်။ ထပ်တူအရေးကြီးတာက စိတ်ရှည်ဖို့၊ အစီအစဉ်ရှိဖို့ပါပဲ။ ကောင်းမွန်သောအလုပ်ခွင်ဆက်သွယ်ရေးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်နေရာတစ်ခုတွင် သင့်ကိုယ်သင်တွေ့ရှိပါက လမ်းညွှန်ချက်တောင်းရန် မကြောက်ဘဲနေပါ။
လွန်ခဲ့သော Netflix ရဲ့ လက်ရှိ CEO က ဘယ်သူလဲ။
နောက်တစ်ခု Google Earth တွင် လက်ရှိ ဟာရီကိန်းဒေတာကို မည်သို့ကြည့်ရှုနိုင်မည်နည်း။